Sida CD-ga loogu koobi karo PC-gaaga | Dayactirka Bios
1 Habka koobiynta xogta CD-ga PC-gaaga
1.1 Isticmaalka barnaamijka ImgBurn ee Windows
1.1.1 Ku soo deji codsiga ImgBurn PC-gaaga
1.1.2 Ku koobbi CD-ga ImgBurn PC-gaaga
1.1.3 Talooyin ku saabsan isticmaalka codsiga ImgBurn
1.2 Isticmaalka codsiga Utility Disk ee Mac OS
2 Habka lagu koobiyaynayo CD-ga maqalka ah PC-gaaga
2.1 Isticmaalka Windows Media Player ee Windows
2.2 Iyadoo loo marayo software iTunes ee Mac iyo Windows labadaba
Ku jeex CD-ga PC-ga waxay ahayd wax si joogto ah loo sameeyo, maadaama aanay jirin siyaabo badan oo xogta loo kaydiyo. Si kastaba ha ahaatee, sida wax walba u horumareen, tani dadka qaar ayaa ilaabay.
In kasta oo ay xaddidan tahay, haddana xaalado badan tani waa habka ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo macluumaadka, maadaama ay aad ammaan u tahay. Si kastaba ha ahaatee, kuwan qalabyada waxay leeyihiin taariikh dhicis. Sidaa darteed, kuwa ugu badan ayaa ah inay bilaabaan inay bixiyaan guuldarrooyinka ka dib da'da 20.
Sidaa darteed, hoos, waxaan ku sharxi doonaa dhammaan beddelka kala duwan ee Sida loo koobiyo CD-ga PC-gaaga, si aad u kaydiso oo aad ugu raaxaysato macluumaadkaaga goorta iyo meesha aad u baahan tahay.
Habka koobiynta xogta CD-ga PC-gaaga
Haddii aad rabto koobi CD oo ka kooban dukumeenti, fiidyowyo, sawiro, ciyaaro ama xog kale oo kombayutarkaga ku jira, waa inaad abuurtaa faylka sawirka dambe. Fadlan ogow in faylalka sawirku ay la mid yihiin faylal (aan la isku dhejin) halkaasoo dhammaan faylasha ku jira CD-ga ay ku kaydsan yihiin. Kuwani waa kuwo wax ku ool ah, si sahlan loo heli karo waxayna ka koobnaan karaan nooc kasta oo fayl ah.
Marka xigta, waxaan sheegi doonaa sida aad awooddo ku koobbi CD-ga PC-gaaga labadaba Windows iyo Mac OS. Markaa.
Isticmaalka barnaamijka ImgBurn ee Windows
Haddii aad isticmaalayso PC Windows ah oo aad rabto inaad abuurto faylka sawirka CD, beddelka ayaa ah inaad isticmaasho ImgBurn. Kani waa codsi bilaash ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku rakibto PC-gaaga koobiyo oo gub CD, DVD iyo Blu-Ray nooc kasta ah. Kadib:
Ku soo deji codsiga ImgBurn PC-gaaga
ImgBurn Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo ay taageerto inta badan ciyaartoyda CD, DVD iyo Blu-Ray ee suuqa. Sidaa darteed, si aad ugu soo dejiso kumbuyuutarkaaga waa inaad:
Marka hore waa inaad ku xidhataa kaaga degel rasmi ah laga heli karo shabakada
Markaa, waa inaad marka hore gujisaa shayga"Muraayadda x - Waxaa soo diyaariyey MajorGeeks".
Ka dib, laga bilaabo qaybta fulinta, sii wad si aad u doorato sumadda "download".
Marka soo dejintu dhammaato, fur faylka SetupImgBurn_x.x.exe oo aad hadda ku soo dejisay PC-gaaga.
Hadda, daaqadda furmo, ku dhufo marka hore "Haa" ka dibna "Xiga”. Hadda, aqbal shuruudaha isticmaalka barnaamijka, adigoo calaamadeynaya dhinaca shayga "Waan aqbalayaa shuruudaha Heshiiska Shatiga".
Ugu dambeyntii, si aad u dhamaystirto qaabeynta,guji marka hore shayga "Next" 5 jeer oo isku xigta ka dibna "Dhamee".
Ku koobbi CD-ga ImgBurn PC-gaaga
Marka codsiga lagu rakibo kombuyutarkaaga, waad awoodaa nuqul ka samee CD-gaaga Kumbuyuutarkaaga adoo isticmaalaya ImgBurn. Si taas loo sameeyo, raac tillaabooyinka, kuwaas oo aan hoos ku xusi doono, kuwan:
Marka hore, ku bilow barnaamijka adigoo gujinaya calaamadda ku taal miiska.
Markaas taabo badhanka"Ka abuur sawir muuqaal disc ah”. Hubi in liiska hoos-u-hoosaadka"Asalka“CD Drive-ka aad rabto inaad nuqul ka sameyso ayaa la doortaa.
Ka dib, dhagsii astaanta "Galka jaalaha ah” Waxay ku taal bidixda hoose. Tan si aad u dooratid galka aad ku kaydin doonto faylka Sawirka CD-ga.
Marka tallaabadan la dhammeeyo, deji xawaaraha akhriska ee saxankaaga.
Hadda sii wad inaad gujiso astaanta loo aqoonsaday inuu yahay "CD”(oo leh falaar buluug ah iyo xaashi madhan oo ku ag taal) si aad xogta uga billowdo.
Ugu dambeyntii, ka dib habraacii hore, waxaad heli doontaa faylka sawirka "ISO”. Qaabkan waxa loo isticmaali karaa in lagu duubo saxan kale (iyadoo la isticmaalayo ImgBurn ama software kale oo ku haboon ujeedadaas) ama waxaad u isticmaali kartaa kombayutarkaga si aad u aragto waxa ku jira.
Talooyin ku saabsan isticmaalka codsiga ImgBurn
Fadlan la soco in haddii laguu soo bandhigo inaad soo dejiso "Software-ka xayeysiintaDheeraadka ah "inta lagu jiro qaabeynta, sida REACHit ama AVG Zen, ha aqbalin, ka saar calaamadda (ama ha saarin) alaabta iyaga khuseeya, markaa waxaad yeelan doontaa awood badan oo kaydinta diskka.
Interface-ka isticmaalaha ImgBurn asal ahaan waa Ingiriis. Laakiin, haddii aad rabto, waxaad u turjumi kartaa Isbaanish adiga oo soo dejinaya fayl gaar ah internetka. Faylka laga hadlayaa waa English.lng oo aad si toos ah uga soo dejisan karto shabakadda oo ay tahay in lagu soo saaro galka C: Faylasha Barnaamijka (x86) Luuqadaha ImgBurnka PC-gaaga.
Isticmaalka codsiga Utility Disk ee Mac OS
Haddii aad isticmaalayso kumbiyuutarka Mac, waxaad ku koobi kartaa CD-gaaga kumbiyuutarkaaga adigoo isticmaalaya "Disk Utility". Kani waa codsiga Mac OS ee caadiga ah ee lagu maareeyo saxannadaada iyo qaybaha qaybaha qalabka noocaan ah. Markaa waa inaad samaysaa waxyaabaha soo socda:
Talaabada ugu horeysa ee aad raacdo waa inaad furto "Disk Utility". Si tan loo sameeyo, waa in aad gujisaa calaamadeeda ku taal galka in ka badan Launchpad.
Ka dib waa inaad ka doorataa magaca CD-ga dhinaca bar-baraha barnaamijka.
Hadda tag menu-ka"Fayl> Sawir cusub> Sawirka (ciwaanka CD)” Waxay ku taal bidixda sare.
Halkaa marka ay marayso daaqad ayaa si toos ah uga furmi doonta shaashaddaada. Ku sii wad si aad u habayso ikhtiyaarka loo aqoonsaday inuu yahay "Master DVD / CD" ka menu-hoos u dhaca"Foomka".
Hadda, dooro faylka aad ku kaydisay faylka sawirka oo guji "Badbaadi"Si aad u bilowdo koobiyaynta xogta ku lug leh.
Ugu dambeyntii, waxaad heli doontaa faylka qaabka "CDR", Kaas oo aad u isticmaali karto sidii faylka caadiga ah ee ISO.
Ikhtiyaar ahaan, haddii aad rabto inaad u beddesho faylka CDR faylka qaabka ISO dhabta ah, fur "Terminal" oo amar "sudo hdiutil makehybrid -iso -joliet -o (Jidka ISO) (CDR way)”. Xusuusnow in halkii aad ka heli lahayd (ISO path) iyo (CDR path) waa inaad gelisaa jidka buuxa ee faylka sawirka aad rabto inaad hesho iyo isha.
Laakiin haddii Utility Disk-gu aanu ku siinin natiijooyinka la rabo, waxaad samayn kartaa faylalka sawirka CD-yada adigoo isticmaalaya wax kale codsiga bilaashka ah taas oo ku habboon Mac OS-kaaga.
Habka lagu koobiyaynayo CD-ga maqalka ah PC-gaaga
Hadda waxaan xusi doonaa qaar ka mid ah beddelka sida loo koobiyeeyo CD-ga maqalka ah PC-gaaga, labadaba nidaamyada Windows sida Mac OS. Kuwani waa:
Isticmaalka Windows Media Player ee Windows
Haddii aad isticmaasho nidaamka qalliinka Windows oo aad rabto in aad nuqul ka songs ka CD-ga muusigga ee PC-gaaga Waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho Windows Media Player. Ciyaartoygan multimedia ee hufan waxa uu ku jiraa ku dhawaad ​​dhammaan noocyada nidaamka qalliinka ee Microsoft, isaga oo si weyn u caawinaya. Marka xigta, waxaan xusi doonaa habka loo raacayo, tani waa:
Si aad "ku jeexdo" CD maqal ah Ciyaarta saxaafadda ee Windows, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso marka hore waa fur barnaamijkaas.
Hadda sii wad si aad u doorato shayga loo qoondeeyay sida "Cinwaanka Disc"Laga bilaabo dhinaca bidixda.
Markaa waa inaad tagtaa menu-ka oo dooro si isku xigta"Nuqul ka sameys CD-ka> Qaabka”. Kuwaani waxay ku yaalaan dhanka sare ee midig.
Halkaa marka ay marayso waa inaad doorataa qaabka wax soo saarka in aad door bidayso. Ka mid ah fursadaha waxaad yeelan doontaa fursado kala duwan. Kuwa ugu guud waa kuwan soo socda:
A THE C.
Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa suurtogalnimada inaad doorato tayada maqalka (Waxaan ku talinaynaa 320 Kbps, taas oo ah tayada ugu sareysa).
Ka dib markaad hagaajiso dhammaan goobaha Windows Media Player, dhig calaamadda calaamadda ku xigta La-socodka Cinwaanka ku koobi pc.
Ugu dambeyntii, dhagsii badhanka loo aqoonsaday inuu yahay "Koobiga CD-ga”(Bidix sare) si loo bilaabo wareejinta xogta. Fadlan la soco in faylasha wax soo saarka lagu keydin doono galka Muusiga ee PC-gaaga.
Iyadoo loo marayo software iTunes ee Mac iyo Windows labadaba
Haddii aad isticmaalayso kombuyuutar Mac OS ah, waxaad ka dooxi kartaa heesaha CD-ga maqalka leh iTunes. Nidaamkan hufan oo wax ku ool ah ayaa laga heli karaa noocyada Mac OS iyo sidoo kale Windows. Labada xaaladood ee lacag la’aan (on nidaamyada Mac OS waxa ay ku jiraan hooyo). Kadib:
Habka soo dejinta CD-yada muusikada iTunes waa mid dareen badan leh. Sidaa darteed, markaad furto barnaamijka oo aad geliso diskka (CD) kombiyuutarka, fadlan ku jawaab "Haa" digniinta ka soo muuqata shaashadda sida "¿¿Waxaad rabtaa inaad soo dejiso (ciwaanka CD) maktabadda iTunes? wayna dhammaatay.
Sida caadiga ah, heesaha waxaa loo kaydiyaa sida faylka AAC. Haddii aad rabto inaad bedesho qaabka wax soo saarka iyo / ama tayada heesaha la helay, tag "iTunes> Xulashooyinka".
Hadda ka dooro "General" kaarka daaqadda si toos ah u furma.
Ka dib, waxaad riixi kartaa badhanka loo aqoonsaday inuu yahay "Dejinta soo dejinta”, Kaas oo ku yaal qaybta hoose ee midig.
Hadda daaqadda furmay, ka dooro qaabka aad door bidayso wax soo saarka ka menu hoos-hoos. Tusaale ahaan, waxay noqon kartaa qaabka MP3.
Ku sii wad si aad u doorato astaanta loo aqoonsaday inuu yahay "Soo dejiso adoo adeegsanaya”. Sidoo kale, ka dooro tayada la doonayo liiska hoos-hoosaadka.
Gabagabadii, waxaan rajaynaynaa in dhammaan macluumaadkan la xidhiidha beddelka kala duwan ee Sida loo koobiyo CD-ga PC-gaaga, aad bay kuu caawinaysaa. Sidoo kale, haddii aad jeclayd maqaalkan, waxaan kugula talineynaa inaad geliso kuwan soo socda link halkaas oo aad ka heli doonto macluumaad kala duwan oo xiiso kuu leh.
Previous: post Previous: Codsiyada nuqul ka ah xiriirada ka iPhone in SIM
Next: post Next: Ogow haddii nambar xanniban uu ku soo wacay